Nhau dzeBhaibheri: Vanosunungurwa Mutorongo - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Tarira ngirozi yakabata iri suo pano rakazaruka retorongo. Vanhu vairi kusunungura vaapostora vaJesu. Ngatiwanei kuti chii chakatungamirira kukuiswa kwavo mutorongo.
Chave chinguvana bedzi chifo chokudururwa kwomudzimu mutsvene pavadzidzi vaJesu. Uye izvi ndozvinoitika: Petro naJohane vanopinda mutembere muJerusarema pakumwe kudeuka kwezuva. Imomo, pedyo nesuo, panomurume aye akaremara upenyu hwake hwose. Vanhu vanomutakurira pano zuva riri rose kuti agopemha mari kuna avo vanopinda mutembere. Paanoona Petro naJohane, anovapemha kuti vamupe chimwe chinhu. Vaapostora vachaiteiko?
Vanomira ndokutarira munhuyo. Petro anoti: 'Handina mari, asi ndichakupa chinhu chandinacho. Muzita raJesu, simuka ufambe!' Petro ipapo anobata munhuyo noruoko rworudyi, uye pakarepo anosvetuka ndokuvamba kufamba. Apo vanhu vanoona izvi, vanoshamiswa uye vanofara kwazvo nokuda kweiri nenji rinoshamisa.
Petro anoti: 'Kuri nesimba raMwari, akamutsa Jesu muvakafa, zvokuti taita iri nenji.' Apo iye naJohane vari kutaura, vatungamiriri vamwe vorudzidziso vanosvika. Vatsamwa nokuti Petro naJohane vari kuudza vanhu nezvokuva akamutswa kwaJesu muvakafa. Saka vanovabata ndokuvaisa mutorongo.
Mangwana wacho vatungamiriri vorudzidziso vanova nomusangano mukuru. Petro naJohane, pamwe chete nomunhu wavakaporesa, vanopinzwamo. Vatungamiriri vorudzidziso vanobvunza kuti: 'Makaita iri nenji nesimbaiko?'
Petro anovaudza kuti kuri nesimba raMwari, akamutsa Jesu muvakafa. Vaprista havazivi chokuita, nokuti havangarambi kuti iri nenji rinoshamisa rakaitika zvomenemene. Saka vanonyevera vaapostora kusachataurazve pamsoro paJesu, ipapo ndokuvarega.
Mazuva zvaanopfuura vaapostora vanopfuurira kuparidza pamsoro paJesu vachiporesa varwere. Mashoko pamsoro pamanenji aya anopararira. Nokudaro kunyange mapoka anobva mumataundi akapoteredza Jerusarema anounzira vaapostora varwere kuti vavaporese. Ikoku kunoita vatungamiriri vorudzidziso vave negodo, saka vanobata vaapostora ndokuvaisa mutorongo. Asika havagarimo nguva refu.
Mukati mousiku ngirozi yaMwari inozarura suo retorongo, sezvaunogona kuona pano. Ngirozi inoti: 'Endai mundomira mutembere, mugopfuurira kutaura kuvanhu.' Mangwanani acho, apo vatungamiriri vorudzidziso vanotuma vanhu kutorongo kundotora vaapostora, vaenda. Pashure vanhu vanovawana vachiparidza mutembere ndokuvaendesa kuhoro yamakurukota.
Vatungamiriri vorudzidziso vanoti: 'Takakupai mirairo yorumana yokusachaparidzazve pamsoro paJesu, asi mazadza Jerusarema nedzidziso yenyu.' Ipapo vaapostora vanoti: 'Tinofanira kuterera Mwari somubati ushe kupinda vanhu.' Nokudaro vanopfuurira kuparidza "mashoko akanaka." Hauziri muenzaniso wakaisvonaka here wokuti titevere?
Mabasa ganhuro 3 kusvikira ku-5.
Chii chinoitika kuna Petro naJohane mamwe masikati pavari kupinda mutemberi?
Petro anotii kumurume akaremara, uye Petro anomupa chii chinokosha kupfuura mari?
Nei vatungamiriri vechitendero vatsamwa, uye vanoitei kuna Petro naJohane?
Petro anotii kuvatungamiriri vechitendero, uye vaapostora vanoyambirwa kuti chii?
Nei vatungamiriri vechitendero vaine godo, asi chii chinoitika vaapostora pavanoiswa mutorongo kechipiri?
Vaapostora vanopindura sei pavanounzwa muimba yeSanihedrini?
Verenga Mabasa 3:1-10.
Kunyange zvazvo tisina kupiwa simba rokuita zvishamiso nhasi, mashoko aPetro akanyorwa pana Mabasa 3:6 anotibatsira sei kuonga kukosha kweshoko roUmambo? (Joh. 17:3; 2 VaK. 5:18-20; VaF. 3:8)
Verenga Mabasa 4:1-31.
Patinoshorwa muushumiri, tinofanira kutevedzera hama dzedu dzechiKristu dzomuzana remakore rokutanga munzira ipi? (Mab. 4:29, 31; VaEf. 6:18-20; 1 VaT. 2:2)
Verenga Mabasa 5:17-42.
Vanhu vasiri Zvapupu, vekare nevemazuva ano, vakaratidza sei kunzwisisa kana totaura nezvebasa rokuparidza? (Mab. 5:34-39)